ChiRomanian Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(235 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ... Mhando dzese dzekubhejera muRomania nhasi zviri pamutemo zvachose uye zvakapararira. Nyika ine nhoroondo refu yekubhejera zviri pamutemo kubvira 1906, pakagadzwa iyo National Lottery Lottery Romana. Munguva yehudzvanyiriri hwechikomonisiti pasi paNicolae Ceausescu kubhejera kwakaziviswa zvisiri pamutemo, asi muna 1990 hutongi hwakabviswa, uye kubhejera kwakave pamutemo zvakare Iyo yekutanga kasino mune post-chikomunisti Romania, yakavhurwa muna 1991.
Nhasi muRomania kune anopfuura makumi maviri makasino, pamwe neanopfuura zviuru makumi maviri emuchina, ayo ari munzvimbo dzekutengesa, maresitorendi uye nedzimwe nzvimbo dzeruzhinji munyika yese. Kubheja zvemitambo zvakare zviri pamutemo zvachose, uye mumaguta makuru eRomania, unogona kuwana mabhuki ane matanda akakwirira. Tsika yekubhejera muRomania yakakurumidza kukura, iyo indasitiri parizvino iri munyika yakatofambira mberi.
Kubhejera pamhepo muRomania nguva pfupi yadarika yakave pamutemo nekugadzirwa kweNational Agency yekubhejera (Hofisi Yemitambo Yemitambo) Kubvumbi 4, 2013. Izvi zvisati zvaitika, kubhejera kwepamhepo kwaive pamutemo zviri pamutemo kubvira 2010, apo mutemo uyu wakapihwa uchibvumidza nzvimbo dzepamhepo kubhejera muRomania. , kuva nenyika rezinesi. Nekudaro, mukushaikwa kwesimba rekutonga uye zvinoenderana nemutemo wemitambo yekubhejera online muRomania, vanoshanda havana kukwanisa kunyorera.
Nhasi munyika mune akawanda emamwe macasino ekune dzimwe nyika anowanikwa maRomania. Ziva kuti hapana mumwe wevashandisi vemuno asina kugamuchira rezinesi muna 2014. Vagadziri vepaInternet vanozivikanwa zvakare muRomania, asi zvakare inonyanya vashandisi vekunze vasina marezinesi Romanian.
Rwendo rweZvinyorwa zveChmumX Romanian Online Casino Sites
Romania - Gungwa Dema inzvimbo inoyevedza, mupata wemashiripiti weDanube, makungwa mazhinji nemakomo anoyevedza, mweya werudo uye ngano dzakavanzika. Asi kunyangwe mufambi sarudzo dzese dzakavhurika kana zvasvika pakubhejera, nekuti zvinotenderwa munyika uye zvinoratidzwa mukusiyana kwayo kwese. CasinoToplists vakatumirwa kuBucharest kuti vazive nezveRomanian indasitiri yekubhejera.
Romania - uko kune zvakare zvishoma nhoroondo;
Mutemo uye mvumo;
Mhedziso yakasimba yekambani yekasino.
Casino inonyanya kuzivikanwa muRomania:
network Olimpiki Casino;
Kushandisa kubhejera: kune mvumo yepamutemo yepamutemo uye yekunze kune dzimwe nyika;
Zvitsva zvishanu zveRomania muBucharest ine mazita edzimba;
Zvinoshamisa pamusoro peRomania nevaRomania.
Nzvimbo yeRomania uye nhepfenyuro shoma yemamiriro ezvinhu
Romania iri kumaodzanyemba-kumabvazuva kweEurope. Nhasi, inyika yeparamende inotungamirwa neMutungamiri Klaus Johannis uye Mutungamiriri weVictor Ponta. Guta guru renyika ndiro guta rekare reBucharest.
Dunhu reRomania raigara neCro-Magnon mamwe makore zviuru makumi mana nezviviri apfuura. Munguva yehumambo hweRoma nyika dzaive chikamu chechimiro chayo. Nenzira, zita razvino rinoshandurwa se "chiRoma".
MuMiddle Ages Romania yaive neTransylvania, Moldavia neWallachia. Nekuda kwekukonana kuri munharaunda yemazera akasiyana vaive chikamu cheHungary Kingdom neOttoman Humambo.
Muchikamu chechipiri chezana ramakore reXIX hukuru hweRomania hwakave huripo miganhu. Dzidziso yakaguma chete muzana ramakumi maviri. Mushure meRumanian Revolution mu1989 yakatanga nhambo nyowani yenhoroondo.
Kubva 2004 Romania inhengo yeNATO, uye kubvira 2007 - nhengo yeEU.
Casino uye kubhejera muRomania
Nhoroondo yemazuva ano yekubhejera muRomania yakatanga kubva muna 1990. Mushure mekubviswa kweCeausescu, nyika yakadzokera kubhizimusi rekubhejera. Kunyangwe pakutanga pakange pasina mitemo yekutonga, vakatanga kuoneka mu1991 nekusvika kweCasino Aistria kambani yeAustria iyo yakagadzira yekutanga yekutanga kasino muguta guru.
Muna 1992 akaonekwa paGaming Commission, iyo yakatevera basa renzvimbo dzese dzekubhejera. Muna 1993 yakatora mitemo pamitero yemakasino. Bhizimusi rekubhejera rakakurumbira zvekuti hurumende yeRomania yakaunza marezinesi ekumanikidza muna 1998. Zvese izvi zvinotsanangurwa mumutemo "Pamutemo wekubhejera."
Kubva 1999, vadzidzisi vemakasitini vanofanirwa kutevera zvinodhaka zvekupa mvumo, kuronga casino muzvivako zvakasiyana, hofisi dzemahotera kana kuti havaiti basa ravo rakananga remitambo.
MuRomania, akabvumira kubhejera kazhinji mazano:
mitambo pamatafura: poker, canasta, baccarat, dema, roulette, punto Blanco;
Kubhejira: kubheji, kubheta mahofisi;
mitambo inoshandisa foni neInternet.
Iwo mutemo wakaomarara zvakakwana kune varongi vevaraidzo yekubhejera. Ndokumbira utarise marongero emakamuri, nhamba yezvivakwa, madhesiki, mitambo yekuzora nezvimwewo. Rezinesi rinowanikwa kwete chete mukuitisa bhizinesi pacharo, asi zvakare rezinesi neumwe neumwe mutambo wemitambo. Kazhinji, marezinesi anoshanda kwenguva
Makore 1-5. Mushure memazuva aya, unofanirwa kuongororwa zvakare, uye utenge rezinesi nyowani.
Kune vese vashandi vekubhejera zvivakwa vanoisa zera muganho, semuenzaniso, kune vatungamiriri - kubva pamakore makumi maviri nematatu. Kune zvakati wandei zvinorambidzwa zvine chekuita nematsotsi marekodhi kana basa muvashandi vehurumende.
Kasino isati yavhurwa, zvinodikanwa kuumba homwe yemari. Inotaridzwa zvakasiyana.
Casino yakakurumbira Romania
MuRomania, makasino mazhinji anosangana nematanho epasi rose. Zvirokwazvo imwe yeakanakisisa anoonekwa seketani yeOlympic Casino. Inosanganisira zvikoro zvipfumbamwe, zvinoshandisa vanhu zviuru zvitatu. Network - inhengo yakazara yeEuropean Casino Association. Vaenzi vanogamuchira yakanakisa mamiriro ekutamba chero echinyakare kubhejera.
Casino Bucharest - imwe yemasino akakurumbira muBucharest, iri pakati peguta mune 5-nyeredzi hotera yakaoma Intercontinental Hotel. Restaurant ndeyemuchadenga: yakanaka yemukati, yakarovedzwa sevhisi, yakanakisa chikafu - izvo izvo zvaunoda zvemutambo wakasununguka. MuCasino Bucharest inoshanda tafura 14 nemitambo tafura 4 ine blackjack, matafura eroulette 7.
Mirage Casino - imwe metropolitan kasino inoshanda kubvira 2003. Iri padyo nehotera Ambassador Hotel paMagheru Boulevard. Yakakura nzvimbo inogara 1000 makwere, pane maviri VIP makamuri. Kune gumi nemaviri matafura emitambo, uye iwe unogona kuita kubhejera kutanga kubva pa12 euro.
Havana Princess Casino iri pakati peguta, inogara mazana mazana maviri emazana. Iyo institution inoshandisa nyanzvi dzakarovedzwa, ichishandira matafura gumi nemaviri mumitambo. Casino inotarisana nevashanyi vekunze, kunyanya kunoitirwa pano nevafambi vanobva kuChina neTurkey.
Casinos enhare muRomania
Nhoroondo yemakasino epamhepo muRomania yakashata. Kunyangwe zviri pamutemo kubhejera chaiko kunobvumidzwa chete mu2015, chaizvo pamaseva eRomania vagara vachishandisa nzvimbo dzemitambo. Pagore nebhajeti yakayerera inosvika hafu yebhiriyoni euros.
Nyoresa zviri pamutemo makasino epamhepo kubvira 2009, gore rega rega, uchipa mabhiri matsva. Asi kushomeka kwebhajeti muna 2014 kwakasunda pakupedzisira hurumende kuti inyore zviri pamutemo. Iye zvino, munharaunda yeRomania unogona kutamba wakasununguka pane ako aunofarira ekubhejera nzvimbo.
Romanian Athenaeum . Kero: Strada Benjamin Franklin 1-3, Bucureşti. Iyi imba yakanaka yekonzati yenyika, iyo inowanzonzi moyo weBucharest. Icho chivakwa chakavakwa muna 1888 mune neo-classical maitiro ane zvinhu zve eclecticism. Iyo yemukati meiyo yakasarudzika yakasarudzika uye hupfumi.
Imba yeParamende . Kero: Strada Izvor 2-4, Bucureşti. Landmark pachikomo Spiro - muenzaniso wakanakisa wenguva yemagariro, ichikwira pamusoro peBucharest pamamita makumi masere nemasere, uye ichisiya ivhu pamamita 86.
National Village Museum . Kero: Şoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff 28-30, Bucureşti 011347. Kunze kwakaunganidza zvivakwa 272 kubva kumatunhu akasiyana enyika.
National Museum of Art muRomania . Kero: 49-53, Calea Victoriei, 010063 Bucureşti. Iyo miziyamu hombe yeEuropean neRomania hunyanzvi ine zviuru zvitatu zvekuratidzira uye makumi matanhatu ezviwanikwa.
Paruwa Herăstrău . Kero: Chikamu 1, Bucureşti. Yakagadzwa muna 1936 pane eponymous lake park iri kuchamhembe kweBucharest.
Chokwadi chinofadza pamusoro peRomania nevaRomani
Bucharest inonzi Little Paris yeEast.
Bran Castle yakavakwa muzana XIV century - anonyanya kufarirwa nzvimbo dzevashanyi munyika, sezvo ichinzi izita rekuti Count Dracula.
Romania ine Zuva reRusununguko - 9 Chivabvu. Asi rino harisi zuva rekukunda muPiri Hondo Yenyika, iro zuva rerusununguko kubva kuOttoman Humambo, yakawanikwa muna 1877.
Romania pamepu yeEurope:
0.1 Kubhejera muRomania
0.2 Rwendo rweZvinyorwa zveChmumX Romanian Online Casino Sites
3 Kubhejera muRomania
3.0.1 Nzvimbo yeRomania uye nhepfenyuro shoma yemamiriro ezvinhu
3.1 Casino uye kubhejera muRomania
3.1.1 Casino yakakurumbira Romania
3.2 Casinos enhare muRomania
3.2.1 Zvitsva zveBucharest
3.2.2 Chokwadi chinofadza pamusoro peRomania nevaRomani
3.2.3 Romania pamepu yeEurope:
kasino kugamuchira mabhonasi